हरे भगवान ! शिव मन्दिरलाई मर्मत गर्दा गर्दै यस्तो चिज भेटियो देखेर सबै चकित – ईमेची डटकम
हरे भगवान ! शिव मन्दिरलाई मर्मत गर्दा गर्दै यस्तो चिज भेटियो देखेर सबै चकित
Posted byईमेची डेक्स July 1, 2019 October 24, 2019 Leaveacomment on हरे भगवान ! शिव मन्दिरलाई मर्मत गर्दा गर्दै यस्तो चिज भेटियो देखेर सबै चकित
मानिसको जीवनमा जब समस्या देखा पर्न थाल्छ अनि उसले अनेक देवी देवताहरूको पूजा पाठ, भाकल आदि गर्न थाल्छ, मन्दिर धाउँछ, जप, तप, हवन, दान, धर्म आदि अनेक उपाय गर्नथाल्छ ।
समस्या समाधान होस् र जीवन शान्तिपूर्ण होस् भनेर यस्तो काम गरिन्छ । समस्याबाट छुटकारा पाउन ज्योतिष तथा धामीझाँक्रीकहाँ पनि पुग्छ ।शास्त्रीय दृष्टिले योग्य एवं गणितको राम्रो दख्खल भएका ज्योतिषको परामर्शले समस्या ठीक हुनसक्ला तर गलत व्यक्तिको चंगुलमा फस्यो भने पैसा र समयको बर्बादी सिवाय केही हुँदैन ।
उसो भए के गर्ने त ? प्रश्न उब्जनु स्वभाविक छ । उत्तर एउटै छ- मानिस भगवान् शिवको शरण पर्‍यो भने उसले अन्यत्र कतै जानु पर्दैन । शिवसँग छ हरेक समस्याको समाधान । यसका लागि आवश्यक पर्छ साँचो श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति । भगवान् शिव समस्त धर्म-सम्प्रदाय, तन्त्रमन्त्र एवं ज्योतिषका जनक हुन् ।
-शिवलिंगमा मह चढाए रूप एवं सौन्दर्य प्राप् हुन्छ । बोलीमा मधुरता आउँछ भने लोकप्रियता वृद्धि हुन्छ ।
Posted byईमेची डेक्स July 1, 2019 October 24, 2019 Posted inधर्म
यी राशि भएका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन् ? हेर्नुहोस तपाइको पनि पर्‍यो कि ?